Baby Kaadị - Olee otú Mee a printable Baby Kaadị | Kaadị Ozi Ideas
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee a printable Baby Kaadị
A nwa kaadị nwere ike ịbụ a nwa ekele kaadị ma ọ bụ a nwa ịsa kaadị. Ihe ọ bụla ọ bụ, na-eziga a nwa kaadị ndị nne na nna ma ọ bụ nne na nna ochie na-eme ka ị na-a akụkụ nke pụrụ iche n'oge nke ezinụlọ. A ahaziri nwa kaadị wee zọpụta ma na-ele mgbe nwa ọhụrụ ahụ na-eto, mgbe a na-akpa ọchị nwa kaadị ga-maa-eme ka ndị ọzọ ọṅụ ezinụlọ na onye ọhụrụ n'anya. Isiokwu a ga-agwa gị otú ị na-eme ka a printable nwa na kaadị akụkụ mbụ. Na mgbe ụfọdụ, figuring ihe dee a nwa kaadị bụ adịghị mfe ka chere. Baby kaadị bụkwa ebe mgbakọ na-egosi gị creativity. Ya mere, anyị na-enye ụfọdụ nwa kaadị ozi echiche na akụkụ nke abụọ.
Part 1: Olee ka a printable Baby Kaadị
Part 2: Baby Kaadị Ozi Ideas
OK, ka ina malitere ime ka a printable nwa kaadị na software akpọ iCollage for Mac - onye mfe iji ngwá ọrụ na nza nke kaadị template, collage ndebiri na kalenda ndebiri gụnyere. Ị na-nyeere na-eme ka a printable nwa na kaadị mfe nzọụkwụ. N'okpuru ebe a bụ nwa nwoke kaadị atụ.
Nzọụkwụ 1: Họrọ a mmasị nwa kaadị template
Ị na-atụ aro ka a na nwa kaadị si wuru na-template: ma otu-mpempe akwụkwọ na ọkara-anọghị n'ogige atụrụ kaadị ndebiri na-gụnyere. Ugboro abụọ pịa thumbnail na a ala akụ ibudata nwa kaadị template n'ihu na-eji ya. Njikọ Ịntanetị si otú a chọrọ.
Nzọụkwụ 2: Tinye nwa kaadị ozi na foto ma ọ dị mkpa
Na Add Photo taabụ, i nwere ike mbubata a nwa foto maka nwa ọhụrụ foto kaadị, ma ọ bụ nanị a katuunu nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị foto ka nwa ị chọrọ igosi gị welcome. Ọzọ, tinye nwa kaadị ozi na icho mma collage taabụ. Lee nwa kaadị ozi n'omume iji nweta n'ike mmụọ nsọ.
Nzọụkwụ 3: Bipute nwa kaadị zipụ
Ugbu a na nwa kaadị dị njikere e biri ebi. Gaa Bipute collage taabụ iji weta nwa gị kaadị imewe. Ndabara ntọala na-emekarị na-arụ ọrụ. Dị ka m na onwe ahụmahụ, na odida obodo nghazi dị mma maka ọkara-anọghị n'ogige atụrụ nwa kaadị, mgbe Eserese nghazi maka otu-mpempe akwụkwọ nwa kaadị. Ma mbụ, i kwesịrị a na-arụ ọrụ na ngwa nbipute ibipụta na nwa gị kaadị. Ma, ebipụta nhọrọ nwere ike ọgaghị adị.
Printable Baby Kaadị Atụmatụ: Ọ bụ mkpari ibipụta a nwa na kaadị A4 akwụkwọ na ị chọrọ ọzọ ọrụ iji nweta zuru okè nwa kaadị. Ya mere na-A5 (5,83 "x 8,27") ma ọ bụ A6 (4.13 "x 5,83") akwụkwọ kwadebere ma họrọ n'elu nri okirikiri nhọrọ ukwuu. Otú a, ọnwụ na-adịkarị adịghị chọrọ. N'ihi na a akwụkwọ ozi akwụkwọ, ị na-atụ aro iji họrọ ala n'aka nri okirikiri nhọrọ ukwuu na ndenye 27,94 x 21,59 (millimeter, obosara x elu) maka odida obodo nwa kaadị, ma ọ bụ 21,59 x 27,94 maka Eserese nwa kaadị. Ka akwụkwọ size, pịa Advanced na họrọ Njirimara na-emeghe dialog.
Ndụ gị ga-ruo mgbe ebighị ebi gbanwere, ma anaghị m chere na ị ga-emetụta.
N'ịchọ ị nọgidere na ngọzi dị ka gị na ezinụlọ gị na-amụba.
Anyị na-ekpe ekpere maka ahụ ike na obi ụtọ n'ihi na gị na onye nta.
Anyị na-ekpe ekpere na ị ga-enwe ọhụrụ gị obere onyinye si n'aka Chineke.
Ekele na ọhụrụ gị òtù ezinụlọ.
Ka ị na-enweta ọṅụ ọhụrụ gị ọrụ dị ka nne na nna.
Anyị na-achọ inwere a ndụ nke obi ụtọ na ọhụrụ gị na obere nwa.
Inwe nwa ọhụrụ bụ otu n'ime ndị kasị ebube, exiting, egwu, ndụ na-agbanwe agbanwe ihe nke ndụ gị. Ekele otiti.
Ị nwekwara ike ịgbakwunye na-akpa ọchị nwa kaadị ozi ikele ọhụrụ so nke ezinụlọ.
Echefukwala eri gị vitamin na nwa gị azụ ọgịrịga na nwa carrots.
Naanị afọ ole na ole ruo mgbe ị ga-asị: N'ihi na m kwuru otú ahụ.
Iji nwalee ịhụ ma ọ bụrụ na ị dị njikere maka nwa ọhụrụ, na-agbalị na-etinye otu ụzọ uwe ime na a kangaruu.
Tukwuru ala. M na-eche na ọ bụ oge nwere 'okwu.' Ụmụ ọhụrụ adịghị n'ezie na-abịa site storks ...
Akpa gị tummy ga-eto, na mgbe ahụ gị na ezinụlọ gị ga-eto. Ebe a bụ ka ibu!
Nnọọ otú ị maara, ụmụ ọhụrụ inu, ha na-esi ísì mgbe ụfọdụ kwa. Ekele otiti.